Heathrow waxay la shaqeysaa Microsoft si ay ula dagaallamaan ka ganacsiga duurjoogta sharci darrada ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Heathrow waxay la shaqeysaa Microsoft si ay ula dagaallamaan ka ganacsiga duurjoogta sharci darrada ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Heathrow waxay la shaqeysaa Microsoft si ay ula dagaallamaan ka ganacsiga duurjoogta sharci darrada ah.
Ka ganacsiga duurjoogta sharci darrada ah ayaa ka mid ah shanta dambi ee ugu faa’iidada badan caalamka waxaana inta badan maamula shabakado dambiilayaal ah oo si heer sare ah u abaabulan kuwaas oo ka faa’iidaysta gaadiidkeena iyo nidaamka maaliyadeed si ay u raraan badeecadaha sharci darrada ah iyo faa’iidada dambiyada ee ay ka helaan adduunka oo dhan.
Heathrow waxay la midoobaan Microsoft, UK Border Force CITES iyo Smiths Detection si ay u geeyaan nidaamkii ugu horeeyay ee sirta macmalka ah ee aduunka kaas oo soo saara oo higsanaya in la joojiyo ka ganacsiga duurjoogta ee madaarada.
Project SEEKER waxaa lagu soo bandhigay HRH Duke of Cambridge munaasabad ka dhacday xarunta Microsoft ee UK maanta.
Ka dib tijaabooyinkii hormuudka ahaa ee Heathrow, Microsoft waxay ku baaqaysaa xarumaha gaadiidka caalamiga ah inay isticmaalaan nidaamka si ay uga caawiyaan la dagaalanka $23bn ee warshadaha ka ganacsiga duurjoogta sharci darrada ah.
Heathrow ayaa la xidhiidhay Microsoft in la tijaabiyo nidaamkii ugu horeeyay ee sirdoon macmal ah oo lagula dagaalamayo ka ganacsiga duurjoogta sharci darada ah. 'Mashruuc SEEKER' waxa uu ogaadaa ka ganacsiga xoolaha ee shixnadaha iyo shandadaha maraya garoonka diyaaradaha isaga oo baadhaya ilaa 250,000 oo jawaan maalintii. Waxay diiwaangelisay 70%+ heerka ogaanshaha ee guusha leh waxayna si gaar ah waxtar ugu yeelatay aqoonsashada walxaha fool-maroodiga sida foolka iyo geesaha. Iyadoo la aqoonsanayo alaabo badan oo la tahriibiyo iyo ka hor, mas'uuliyiintu waxay heystaan ​​waqti dheeri ah, baaxad iyo macluumaad si ay u daba galaan dambiilayaasha oo ay ula dagaallamaan $ 23bn ee warshadaha ka ganacsiga duurjoogta sharci darrada ah.
Marka lagu daro Microsoft, Project SEEKER waxaa la sameeyay iyada oo lala kaashanayo Ciidanka Xuduudaha UK iyo Smiths Detection waxaana taageera Royal Foundation. Horumarinta Microsoft waxay bareen Project SEEKER si loo aqoonsado xayawaanka ama alaabada sida alaabada sharci darrada ah ee loo isticmaalo daawooyinka, iyo tijaabooyinka Heathrow waxay muujiyeen algorithm in lagu tababari karo nooc kasta laba bilood gudahood. Tiknoolajiyadu waxay si toos ah u ogeysiisaa ciidamada amniga iyo ciidamada xuduudaha marka ay ogaadaan shay sharci darro ah oo duurjoogta ah oo ku dhex jira xamuul ama sawir qaade, walxaha la qabto ayaa markaa caddayn ahaan loo isticmaali karaa dacwadaha dembiyada ee ka dhanka ah tahriibayaasha.
Duke of Cambridge ayaa booqday MicrosoftXarunta dhexe si aan u maqlo wax ku saabsan awooda tignoolajiyadan taas oo qayb ka ah shaqadiisa barnaamijka United Foundation ee Duurjoogta. Si loo taageero horumarinta tignoolajiyadan cusub, kooxda Project SEEKER waxa ay awooday in ay ka faa'iidaysato xidhiidhka caalamiga ah ee United for Wildlife ee khibradda ganacsiga duurjoogta sharci darrada ah. Intaa waxaa dheer, United for Wildlife waxay la shaqayn doontaa hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin ee qaybta gaadiidka si ay u taageeraan liiska caalamiga ah ee ka soo bixida kartida SEKER.
Jonathan Coen, Agaasimaha Amniga ee Madaarka Heathrow, ayaa yiri: "Mashruuc SEEKER iyo iskaashiga aan la leenahay Microsoft iyo Smiths Detection ayaa naga ilaalin doona hal tallaabo oo ka horraysa tahriibiyeyaasha, annaga oo sahaminaya tignoolajiyada cusub ee naga caawin doonta ilaalinta duurjoogta ugu qaalisan adduunka. Hadda waxaan u baahanahay inaan aragno xarumo badan oo gaadiid ah oo dejinaya nidaamkan cusub, haddii aan dooneyno inaan qaadno tallaabo macno leh oo heer caalami ah oo ka dhan ah warshadahan sharci darrada ah.
United for Wildlife waxay hiigsaneysaa inay ka dhigto wax aan macquul aheyn tahriibiyeyaasha inay raraan, maalgeliyaan ama ka faa'iideystaan ​​wax soo saarka duurjoogta sharci darrada ah iyadoo la dhisayo xiriir muhiim ah oo ka dhexeeya waaxyaha gaadiidka iyo maaliyadda, hay'adaha aan dawliga ahayn iyo hay'adaha fulinta sharciga iyo dhiirigelinta wadaagga macluumaadka iyo habka ugu wanaagsan ee ka dhexeeya kuwan. daneeyayaasha. United for Wildlife waxay la shaqaynaysay ururada sida Microsoft si ay kor ugu qaadaan wacyiga teknoolajiyada ee taageeri kara dadaalka lagu carqaladeynayo ganacsiga dembiyada ee alaabta duurjoogta ah ee caalamka.